Ciidamada dowladda oo la wareegay deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa Itoobiyaan ah ayaa la sheegayaa inay maanta la wareegeen deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay hore gacanta ugu haayeen kooxda Al-shabaab.
Dagaalyahanadda Al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka Moqokori ayaa waxaa saakay halmar weerar kusoo qaaday ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa Itoobiya, iyadoona kadib uu labadaasi dhinac dhexmaray dagaal muddo kooban socday.
Rasaas badan ayaa laga wada maqlayay deegaanka Moqokori, taas oo u dhaxeeysay ciidamada huwanta ah iyo dagaalyahanadda Al-shabaab, iyadoona markii dambe ay Al-shabaab halkaasi isaga baxeen.
Saraakiisha ciidamada xoogga dakla Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay inay haatan gacanta ku haayaan deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay sheegeen inay kala wareegeen Al-shabaab.
Dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa in muddo ah ka tallinayay deegaanka Moqokori, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn qasaaraha ka dhashay dagaalkaas.
Xaaladda deegaanka Moqokori ayaa haatan ah mid degan, inkastoo mararka qaar la maqlayo rasaas goos-goos ah oo dhaceeysa.